Mabhuku akanakisa naPérez-Reverte, yakasarudzika sarudzo | Zvazvino Zvinyorwa
Captain Alatriste iri, pasina mubvunzo, rimwe remabhuku akanakisa aPérez-Reverte. Izvi zvinomisikidzwa pasina kurerutsa yake yakakura repertoire yemanoveli, anopfuura makumi mana makopi uye akashandurwa mumitauro yakawanda. Iko kukanganisa kweaya mabasa kune anoverengwa veruzhinji nevatsoropodzi kwakatungamira munyori kuve wemu runyorwa rwe "vanotengesa zvakanyanya." Pamusoro peizvi, akati wandei emabasa ake akave akashandurwa kuita firimu neterevhizheni.
Pérez-Reverte munyori wechiSpanish uye mutori wenhau anozivikanwa zvakanyanya nebasa rake rakakura uye risina chaanopomerwa. Parizvino, yakatsaurirwa chete kune zvinyorwa, kunyanya kune nhoroondo yenhoroondo. Basa rake rakamubvumidza kuhwina mibairo yakati wandei yemunyika uye yepasi rose mibairo nekucherechedzwa, zvinoreva kuti haakwanise kuenda asingaonekwe.
1 Nhoroondo yePererez-Reverte
1.1 Pérez-Reverte, mutori wenhau
1.2 Pérez-Reverte uye zvinyorwa
2 Sagas naPérez-Reverte
2.1 Captain Alatriste Saga
3 Mabhuku aPérez-Reverte
3.1 Captain Alatriste (1996)
3.2 Mambokadzi weSouth (2002)
3.3 Chikumi (2016)
3.4 Iyo cyclops Cave (2020)
4 Mamwe mabhuku naPérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez akaberekwa musi waNovember 25, 1951, muCagagaga, guta rakazvimiririra reDunhu reMurcia, kuSpain. Akadzidza zvidzidzo zvehunyanzvi kuComplutense University yeMadrid. Ikoko, akavandudza mabasa maviri panguva imwe chete mukati memakore matatu ekutanga: utapi venhau nesainzi yezvematongerwo enyika. Nekudaro, iye pakupedzisira akazendamira kune vekare, nokudaro achiva mutapi venhau akapedza kudzidza.
Pérez-Reverte, mutori wenhau
Akashandisa basa rake semutori wenhau kwemakore makumi maviri nemaviri akateedzana, kubva muna21 kusvika 1973. Kwemakore gumi nemaviri papepanhau Pueblo uye makore ekupedzisira mapfumbamwe mu TVE senyanzvi muhondo. Mune rake basa rezvenhau, akafukidza kukakavara kukuru kutenderera pasirese, pakati pazvo patinogona kutaura:
Zvakare, kubva pagore 91 akagadzira mukurumbira maficha ezvinyorwa zve XLweekly (Vocento boka anowedzera). Saizvozvowo, muna 1990 Pérez-Reverte akange aripo pawairesi, muchirongwa Mutemo wemugwagwa de RNE (Spanish National Radio). Kupedzisa basa rake mu TVE, aive murairidzi wechirongwa ichi Kodhi yekutanga, Musoro wenyaya yavo yaive nhema nhoroondo.
Pérez-Reverte uye zvinyorwa
Pérez-Reverte akapinda mumabhuku muna 1986, paakaburitsa Hussar, bhuku rake rekutanga, rakaiswa muzana ramakore rechiXNUMX. Makore maviri gare gare akapa basa iri Fenzi tenzi, yakagadzirwa muMadrid. Kunyangwe huremu hwemabasa aya, munyori akatanga kuzivikanwa mushure mekumisikidzwa kwe Tafura yeFlanders (1990) uye Iyo kirabhu yeDumas (1993).
Mushure mekurega basa kubva muutapi venhau (muna 1994), Perez-Reverte akazvipira zvachose kumabhuku, izvo zvakamukurudzira kuti agadzire makuru makuru. Izvi zvinosanganisira seti yemabhuku anoumba adventures e Captain Alatriste, uye izvo zvakabuda sa1996. Zvinogona kutaurwa kuti iri iri saga rakapa munyori kubudirira kwenyika, zvekuti rakaburitswa munyika dzinopfuura makumi mana.
Kubva 2003, Pérez-Reverte anga ari chikamu chenhengo dzakavhenekerwa dzeRoyal Spanish Academy, vachitora chigaro chaT. mu2016 akatanga bhuku saiti Zenda, iyo iye zvakare ari mukuru mupepeti. Mugore rimwe chetero akaburitsa imwe yeakanyanya kurova, iyo Lorenzo Falcó trilogy. Mugore rino rapfuura munyori akapa mabhuku ake maviri: Mutsara wemoto y Bako rema cyclops.
Munyori Pérez-Reverte ane nhoroondo dzakakosha uye dzinozivikanwa mumushumo wake, uye mavari mavara maviri anoshamisa anomira pachena: Alatriste na Falcó. Ivo vaviri nyeredzi mumabhuku maviri aive akabudirira zvine mutsindo mushanduro yavo yekutanga zvekuti vakakodzera kuenderera kwenyaya dzavo. Kubva ipapo masaga anotevera akazvarwa:
Captain Alatriste Saga
Alatriste's book collection yakatanga muna 1996 uye inoumbwa nemanyorerwo manomwe. Izvi zvinotanga na Guta guru Alatriste, yakagadzirirwa naPérez-Reverte nemwanasikana wake Carlota Pérez-Reverte. Mamwe ese mabasa akaenderera mberi nemunyori chete. Iwo akavakirwa pane nyaya yaGeorge Alatriste naTenorio, musoja akasiya basa weFlanders chetatu.
Mabhuku azere nekuita, vachirondedzera zvaiitwa nemutungamiriri wemapfumo muMadrid munguva yeXNUMXth century. Ichi chibvumirano chaireva kumberi uye shure kwePererez-Reverte, iyo inoratidzwa mune mamirioni kutengesa pasirese. Uye zvakare, pakave nekugadziridzwa kwakawanda kwebasa, zvese mumamuvhi, terevhizheni, komiki, uye kunyange mutambo wekutamba. Muna 2016, munyori akaita muunganidzwa wemabasa ese, aakadana kuti: All Alatriste. Iwo mabhuku anoumba kuunganidzwa ndeaya:
Kuchenesa ropa (1997)
Zuva reBreda (1998)
Ndarama yamambo (2000)
Iyo Knight muYellow Doublet (2003)
Kurera Corsairs (2006)
Muna 2016, Perez-Reverte anotanga nhevedzano yenoveli nhatu dzakatarisana naLorenzo Falcó. Iwo mabasa akazara nezvakavanzika, mhirizhonga, kushuvira uye kuvimbika izvo zvine protagonist yavo semusori nemaoko anopinza zvisina mwero. Kubudirira kwenyaya kunoitika muEurope, mumakore 1936 na1937, panguva yeHondo Yenyika. Mavara anokurumidza kubata muverengi uye anomutungamira kuti anzwe manzwiro echiito chega chega.
Falcó inoperekedzwa nevakadzi vaviri nemurume, hama Monteros naEva Rengel; idzi ndidzo shamwari dzake, uye, panguva imwechete, avo vaakabatwa Iyo yakateedzana ine nzendo huru, izere nerangano, kwaunogona kuona kuenderera mberi kwekukonana kwevatambi vakuru kuti vawane zvavanoda. Iye protagonist anozivikanwa nekuti kunyangwe aine hunhu hwakati wandei hunogona kumubatsira kuzadzisa zvinangwa zvake, anoshandisa nzira dzisiri dzechivanhu kuzviita. Fomura yakashandiswa naPérez-Reverte yakamupa kuongororwa kwakanakisa uye mamirioni evaverengi.
Trilogy trilogy inoumbwa ne:
Chimwe chezvinhu zvakanakisa chingagone kuitika kune dzenyika dzetsamba dzeSpanish ndechekuti Pérez-Reverte akafunga kuzvipira zvizere kumabhuku. Pasina mubvunzo, chinyoreso chake chakafumisa zvikuru mabhaisikopu emabasa eraraibhurari yeCastilian. Mamwe emanoveli akatanhamara emunyori ndeaya:
Iri basa renhoroondo-ngano rinorondedzera mavambo ezviitiko zveane simba pfumo uye murwi wehondo wepamudyandigere: Diego Alatriste naTenorio. Iyo nyaya yakaiswa muzana regumi nemanomwe-century Madrid, mune yakashata uye inoderera Spain. Nyaya yacho inotaurwa naIñigo Balboa, mwanakomana weaimbova shamwari yehondo yemutungamiriri muFlanders matatu.
Zano rinotanga naGeorge Alatriste mutirongo, nekuti akatadza kubhadhara zvikwereti zvake zvemutero. Mushure mekusunungurwa mutirongo, mafambiro aAlatriste anotanga. Mavari, hondo dzine simbi dzinopenya murima rehusiku ndidzo protagonists huru. Gualterio Malatesta -sword uye mhondi-, Fernando de Quevedo -munyori uye shamwari yaAlatriste- naFray Emilio Bocanegra -mubvunzi ane utsinye- ndevamwe vatambi vanopa hupenyu kumapeji aya.
Captain Alatriste ...
Mambokadzi wekumaodzanyemba (2002)
Iyi nhoroondo inotarisa pahupenyu hwaTeresa Mendoza Chávez (aka La mejicana), mukadzi wechidiki weSinaloa (Mexico). Mushure mekufa kwemukomana wake "El güero" - mutyairi wendege akabatana zvakanyanya neJurezrez cartel - Teresa anomanikidzwa kuenda kuSpain, kwaanozova nemavambo matsva, asi semutengesi wezvinodhaka.
Iyo rangano inoitika pakati pekugadzwa muMexico, Spain uye iyo Strait yeGibraltar. Ikoko, Teresa anozoedza kuzvimanikidza kuita bhizinesi rinozivikanwa nekutengesa, rudo, chishuwo nemakaro. Vazhinji vanopokana kuti yakavakirwa pazviitiko chaizvo, kunyangwe Pérez-Reverte achisimbirira kuti inyaya yekunyepedzera. Iyi nhoroondo yakagadziridzwa kuterevhizheni muna 2011 uye kutepfenyurwa pachiteshi cheTelemundo. Zvinofanira kucherechedzwa kuti munyori haana kufarira kwadzakabva.
Mambokadzi weSouth (Zvakanakisisa ...
Bhuku rekutanga reiyo Falcó trilogy, yemanyepo-enhoroondo genre, anotanga mafambiro ehunyanzvi nyanzvi uye mumiriri wehungwaru: Lorenzo Falcó. Iyo nyaya inoisa muverengi pakati peSpanish Civil War, munzvimbo yakatarwa nehuwori uye uko mamenari ari iwo akabhadharwa kwazvo.
Falcó inopihwa basa rekupinza uye kununura rakakosha shanduko kubva muAlicante jeri. Icho chiitiko chekuzviuraya chinogona kushandura mafambiro enhoroondo yeSpain. Idzo hama Montero naEva Rengel ndivo vari kutarisira kuperekedza protagonist munzvimbo izere nekusahadzika, kuita, kutengesa uye kuchiva.
Bako rema cyclops (2020)
Nderimwe remabhuku ekupedzisira naPérez-Reverte, mune anopfuura makumi mana nemakumi mashanu emameseji akanyorwa kubvira 45.000 paTwitter akaunganidzwa - netiweki iyo munyori anodana "mubako wecyclope" (uye iwe unotoziva panonzi Zita) -. Basa racho rine makore gumi mapfupi, asi akakosha pfungwa, kazhinji kubva mumabhuku. Mitsetse yake inoitwazve mune inonzi Lola bar, inzvimbo chaiyo apo munyori anosangana nevateveri vake uye opa nzira yekukurukurirana kwakakosha.
Kune avo vanofarira, Bako rema cyclops inowanikwa mumhando eBook
Cyclops bako: ...
Mamwe mabhuku naPérez-Reverte
Fenzi tenzi (1988)
Iyo kirabhu yeDumas (1993)
Mumvuri wegondo (1993)
Nzvimbo yeComanche (1994)
Nyaya yekukudzwa (Zvidiki) (1995)
Basa pfupi (1995)
Drum ganda (1995)
Tsamba yakatenderera (2000)
Nechinangwa chekukanganisa (2001)
Usandibata ndiri mupenyu (2005)
Munyori wehondo (2006)
Zuva rekutsamwa (2007)
Bhuruu maziso (2009)
Patakakudzwa mercenary (2009)
Little Hoplite (2010)
Ngarava dzinorasika pamhenderekedzo (2011)
Iyo tango yemuchengeti wekare (2012)
Murwere sniper (2013)
Imbwa nevanakomana vezvidhoma (2014)
Varume vakanaka (2015)
Hondo yevagari vemo yakaudza vechidiki (2015)
Imbwa dzakaomarara hadzitambe (2018)
Nhoroondo yeSpain (2019)
Line yemoto (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa naPérez-Reverte